Dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo martiqaad u fidiyay Isimada Puntland iyo Bannaanbax lagu taageerayo Cali Khalif Galayr oo ka dhacay magaalada Garowe. 23/10/01
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in ay dhawaan soo gaartay isimada Puntland martiqaad gooni gooni ah oo ay u fidinayaan dowladaha Itoobiya iyo Kenya. Martiqaadkan oo si toos ah ugu socdo Isimada Puntland gaar ahaan kuwa ku shiraya Garowe ayaa dad xog ogaal ah sheegayaan in dowladahaas rabaan in ay kala hadlaan xaaladda gobolada laysku yiraahdo Puntland oo cakiran.
Dad badan ayaa arintaas walaac ka muujiyay halista ka imaan karta martiqaadkan haddii ay aqbalaan isimada martiqaadka loo fidiyay oo bur bur u keeni kara shirka hadda ka socda magaalada Garowe oo iminka dhutinaya.
Horey ayay dowladda Itoobiya martiqaad ugu soo dirtay Isimada Garowe in kastoo ay ka gaabsadeen in ay aadaan.
Dhinaca kale, shalay waxaa ka dhacay barxadda Shidaalka ee Garowe bannaan bax looga soo horjeedo arrinta ah in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda Cali Khaliif Galeyr oo ay xildhibaanda baarlamaanka KMG ahi isla shalayba bilaabeen in ay isu diiwaan geliyaan ka doodisteeda.
Dadka mudaaharaadayay ayaa muujinayay taageerada ay u hayaan xukuumada uu madaxa ka yahay Dr. Cali Khaliif, waxayna ku hanjabeen hadii lagala noqdo kalsoonida inaysan iyaguna taageeri doonin tan cusub ee la soo dhisi doono.